आफ्नै २ छोरालेबाबुको ह’त्या गरेर शव खाट मुनि लुकाए ! वुहारीले ससुरा खोजेपछि खुल्यो रहस्य - हातेमालो डेली
आफ्नै २ छोरालेबाबुको ह’त्या गरेर शव खाट मुनि लुकाए ! वुहारीले ससुरा खोजेपछि खुल्यो रहस्य
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–१४ झटियाईका ५५ वर्षीय सत्यराम चौहानको ह त्या उनकै छोराहरुले गरेको घ’टना सार्वजनिक भएको छ । उनको श’व विराटनगर आफ्नै घर भित्र गा’डेको अवस्थामा फेला परेको थियो । यस घुटनामा जेठो छोरो २९ वर्षीय रोहित र माइलो २६ वर्षीय नागेन्द्र चौहानको संलग्नता रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
घ’टना गराएर गरेर उनीहरुले बाबुको श’व लुकाउन यस्तो गरेको प्रहरीले अनुसन्धानवाट पत्ता लगएको छ । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीका अनुसार दाजुभाइले शनिबार राति बाबुको ह त्या गरेर श’व घरभित्रै व्यवस्थापन गरेको अनुसन्धानवाट खुलेको जनाएका छन् ।
घटनाको चार दिनपछि बुधबार घरभित्रै सत्यरामको श व भेटिए पछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तीन छोरामध्ये सत्यराम रोहितसँग बस्दै आएका थिए। रोहित अविवाहित हुन्। माइलो छोरो नागेन्द्रको परिवार विराटनगर–१५ मा डेरामा बस्छ। कान्छो छोरा सोमकुमार तीन वर्षदेखि परिवारको सम्पर्कमा छैनन्। जेठो र माइलो दुवै छोरा ज्यालामजदुरी गर्छन्।
गत शनिबार रोहित कामबाट फर्किएलगत्तै नागेन्द्र पनि घर आइपुगे,’ अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले भने, ‘त्यत्तिकैमा रोहितसँग सत्यरामको वि वाद भयो। र क्सीले खा एर मा’त्ति’एका दुवै छोरा मिलेर सत्यरामको ह त्या गरेको खुलेको छ।’
घ’टना विवरणअनुसार सत्यरामले रोहितसँग पैसा मागेका थिए। रोहितले छैन भन्ने जवाफ दिए। अनि बाबुले रोहितलाई घरबाटै निकालिदिन्छु भनेपछि वि वाद च र्केको थियो। घरबाटै निकालिदिने भनेपछि रोहितले नजिकै रहेको फ’रुवाले बाबुको टा उकोमा प्र हार गरेका थिए।
बाबु ढ’लेपछि नागेन्द्रले पनि प्र’हार गर्दा निधन भएको खुलेको छ। ‘बाबुको निधन नै भएपछि घ’टनाका बारेमा बाहिर कोही कसैले थाहा नपाउन् भनेर घर भित्रै गा ड्ने सल्लाह दाजु–भाईले गरे,’ प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने,‘त्यसपछि बाबु सुत्ने खाटको साइटमा खा ल्डो खन्दै श’व पु रेछन्।’
‘श’व व्यवस्थापनका लागि बाहिर निकालेमा गाउँलेले थाहा पाएर घ’टना सार्वजनिक हुने थियो,’ प्रहरीले सोधपुछ गर्ने क्रममा रोहितले भने, ‘त्यही भएर घरभित्रै राखेको जवाफ दिएका थिए ।’ छोराहरुले सत्यरामको ह त्या राति गरे पनि श’व भने आइतबार बिहान उज्यालो भएपछि मात्रै गा डेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
एसपी अधिकारीका अनुसार नागेन्द्रकी पत्नी बुधबार बेलुकी ससुरा र जेठाजु बस्ने घरमा पुगेपछि घ’टना बाहिर आएको हो। सधैं कोठामा आइरहने ससुरा चार दिनसम्म किन आउनुभएन भनेर बुझ्न जाँदा बुहारीले घरमा कोही देखिनन्। त्यो कुरा पति नागेन्द्रलाई सुनाइन्। त्यसपछि बुवा र दाजु बे पत्ता भएको भन्दै नागेन्द्र प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए।
र क्सीले मा तेर आइपुगेका रोहतलाई प्रहरीले निय’न्त्र’णमा लिएर अनुसन्धान गर्दा घ’टना बाहिर आएको प्रहरीले जनाएको छ। रोहितकै बयानका आधारमा नागेन्द्रलाई पनि प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ।
Previous articleमहानायको भारतलाई झटारो, ‘इतिहास पल्टाएर हेर, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भू-भाग हो’ (भिडियो हेर्नुस्)
Next articleमहामारीका बेला गोरखाका बालकमा देखियो यस्तो सङ्क्रमण